मेलम्चीको बाँध फु`ट्यो: इन्जि`नियर सहित दुई बेप`त्ता, गाडी पनि बगायो ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/मेलम्चीको बाँध फु`ट्यो: इन्जि`नियर सहित दुई बेप`त्ता, गाडी पनि बगायो !
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मु`ख्य सुरुङमा परी`क्षणका लागि पानी हालिँदै । आइतबार बिहान ९ बजे मुख्य सु`रुङमा पानी हालिएको आयोजनाले जनाएको छ । काठमाडौँ तर्फ पानी जाने सुरुङ बन्द गरेर आयोजनाको पहिलो अडिट मार्ग बाट पानी परीक्षण गरिएको हो ।मेलम्ची खानेपानी आयो`जनाको बाँध फुटेको छ। मंगल`बार बाँधको १७ नम्बर गेट भत्किन पुगेको हो।
गेट भत्किँदा एक इन्जिनियर सहित २ जना बे`पत्ता भएका छन् । बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहे पनि हाल सम्म फेला नपरेको हेलम्बु गाउँपालिकाका अ`ध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताएका छन्।
असार २१ गते बिहान ९ बजे मुख्य सुरुङमा पानी हालिएको थियो । काठमाडौँतर्फ पानी जाने सुरुङ बन्द गरेर आयोजनाको पहिलो अडिट मार्गबाट पानी परीक्षण गरिएको हो । बेपत्ता हुनेमा एक इन्जिनियर र एक चालक उनले बताए। बेपत्ता भएकाहरुको खोजीकार्य जारी छ। खोजि कार्य जारी भएपनि खोलामा बगेको हुँदा भेट्न सकिएको छैन।
आयोजनाको सुरुङमा पठाइएको पानीको अव`स्था हेर्नका लागि जाँदा ए`क्कासी बाँधको १७ नम्बर गेट भत्किएको बताइएको छ।बाँधको भत्किँदा एउटा गाडी समेत बगाएकाे छ भने अन्य दुई जना घा`इते भएका छन्। घा`इते भए`काहरुलाई उपचारका लागि काठ`माडौं पठाइएको छ।
गत असार २१ गते मात्रै मेलम्ची खाने पानी आयो`जनाको मुख्य सुरुङमा परी क्षणका लागि पानी हालिएको थियो। काठमाडौँ तर्फ पानी जाने सुरुङ बन्द गरेर आयोज नाको पहिलो अडिट मार्ग बाट पानी परीक्षण गरिएको थियो।
पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर महिला विना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ !!